Yohane 14 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yohane Kyerɛwtohɔ 14:1-31
Yesu nko ara na yebetumi afa no so akɔ Agya no nkyɛn (1-14)
‘Mene ɔkwan no, nokware no, ne nkwa no’ (6)
Yesu hyɛɛ bɔ sɛ ɔbɛma honhom kronkron no aba (15-31)
“Agya no yɛ kɛse sen me” (28)
14 “Mommma mo koma nntu.+ Munnye Onyankopɔn nni;+ me nso, munnye me nni. 2 Tenabea* pii wɔ m’Agya fi. Sɛ ɛnte saa a, anka mɛka akyerɛ mo. Merekɔ akosiesie baabi ama mo.+ 3 Na sɛ mekɔ kosiesie baabi ma mo a, mɛsan aba bio na mabɛfa mo akɔ me fi, na baabi a mewɔ no, mo nso moaba hɔ bi.+ 4 Baabi a merekɔ no, munim kwan no.” 5 Ɛnna Toma+ bisaa no sɛ: “Awurade, yennim baabi a worekɔ. Enti ɛbɛyɛ dɛn na yɛahu kwan no?” 6 Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Mene ɔkwan+ no, ne nokware+ no, ne nkwa+ no. Obiara mma Agya no nkyɛn, gye sɛ ɔnam me so.+ 7 Sɛ munim me a, anka munim m’Agya nso. Efi seesei rekɔ, munim no, na moahu no.”+ 8 Ɛnna Filipo ka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, kyerɛ yɛn Agya no, na ɛno ara ye ma yɛn.” 9 Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Filipo, enti bere tenten a me ne mo atena yi nyinaa, wunnya nhuu me? Obiara a wahu me no ahu Agya no nso.+ Adɛn nti na woreka sɛ, ‘Kyerɛ yɛn Agya no’? 10 Wunnye nni sɛ mewɔ Agya no mu, ɛnna Agya no nso wɔ me mu+ anaa? Nsɛm a meka kyerɛ mo no, ɛnyɛ me ara m’adwene na mede ka.+ Mmom Agya a ɔwɔ me mu no na ɔreyɛ ne nnwuma. 11 Munnye me nni sɛ mewɔ Agya no mu, na Agya no nso wɔ me mu. Sɛ ɛnte saa nso a, monhwɛ nnwuma no na munnye nni.+ 12 Nokware, nokware, mereka akyerɛ mo sɛ, nea ogye me di no, ɔno nso bɛyɛ nnwuma a meyɛ no bi; na ɔbɛyɛ nnwuma akɛse asen eyinom,+ efisɛ merekɔ Agya no nkyɛn.+ 13 Afei nso, biribiara a mubebisa wɔ me din mu no, mɛyɛ, na Ɔba no nti, wɔahyɛ Agya no anuonyam.+ 14 Sɛ mubisa biribiara wɔ me din mu a, mɛyɛ. 15 “Sɛ modɔ me a, mubedi m’ahyɛde so.+ 16 Na mɛsrɛ Agya no, na ɔbɛma mo ɔboafo* foforo a ɔne mo bɛtena daa.+ 17 Ɛno ne nokware no honhom+ a wiase no ntumi nnya, efisɛ wiase no nhu no, na ennim no nso.+ Mo de, munim no, efisɛ ɛwɔ mo nkyɛn, na ɛte mo mu. 18 Merennyaw mo sɛ nnyanka. Mereba mo nkyɛn.+ 19 Aka kakra, wiase no renhu me bio. Nanso mo de, mubehu me,+ efisɛ mete ase, na mo nso mobɛtena ase. 20 Saa da no, mubehu sɛ mewɔ m’Agya mu, na mowɔ me mu, na me nso mewɔ mo mu.+ 21 Obiara a otie m’ahyɛde na odi so no, ɔno na ɔdɔ me. Na nea ɔdɔ me no, m’Agya bɛdɔ no, na me nso mɛdɔ no, na meyi me ho adi akyerɛ no pefee.” 22 Yuda,+ ɛnyɛ Iskariot, bisaa no sɛ: “Awurade, dɛn na asi a enti wopɛ sɛ wuyi wo ho adi kyerɛ yɛn pefee, na ɛnyɛ wiase no?” 23 Yesu buaa no sɛ: “Sɛ obi dɔ me a, obedi m’asɛm so,+ na m’Agya bɛdɔ no, na yɛbɛba ne nkyɛn na yɛde hɔ abɛyɛ yɛn tenabea.*+ 24 Obiara a ɔnnɔ me no, onni m’asɛm so. Asɛm a mote no nyɛ me dea, na mmom ɛyɛ Agya a ɔsomaa me no dea.+ 25 “Maka eyinom akyerɛ mo bere a mewɔ mo nkyɛn yi. 26 Nanso ɔboafo no, honhom kronkron no, nea Agya no bɛsoma no me din mu no, ɔno na ɔbɛkyerɛ mo biribiara, na wakaakae mo nea maka akyerɛ mo nyinaa.+ 27 Mede asomdwoe gyaw mo; mede m’asomdwoe ma mo.+ Ɛnyɛ sɛnea wiase no de asomdwoe ma na mede ma. Mommma mo koma nntu, na mommma ɛmmmɔ hu. 28 Motee sɛ meka kyerɛɛ mo sɛ, ‘Merekɔ, na mɛsan aba mo nkyɛn.’ Sɛ modɔ me a, mo ani begye sɛ merekɔ Agya no nkyɛn, efisɛ Agya no yɛ kɛse sen me.+ 29 Enti madi kan aka akyerɛ mo ansa na aba, na sɛ ɛba a, moagye adi.+ 30 Me ne mo renkasa pii bio, efisɛ nea odi wiase so+ no reba. Na onni me so tumi.+ 31 Nea ɛbɛyɛ na wiase no ahu sɛ medɔ Agya no, nea Agya no ahyɛ me sɛ menyɛ no, ɛno ara na mereyɛ.+ Monsɔre, momma yemfi ha nkɔ.
^ Anaa “Dabere; Adan.”
^ Anaa “ɔwerɛkyekyefo.”
^ Anaa “fi.”